Umthandazo ku-Anima Yedwa Ukwenza ukuba umntu eze [+]?
Umthandazo kumphefumlo wedwa ukwenza umntu eze Ingaba sisixhobo esiyimfihlo esisincedayo ngala maxesha apho kungekho mntu wumbi.
Ngala maxesha sinqwenela ngomphefumlo wethu wonke ukumbona lo mntu kodwa asazi ukuba enze ntoni okanye enze ntoni na kuba nguye ozenzela isigqibo sokuza kusibona, lo ngumthandazo onokuba luncedo kuthi ngalo mzuzu.
1 Umthandazo kumphefumlo wodwa ukwenza umntu eze yintoni?
1.1 Umthandazo kumphefumlo wedwa ukwenza umntu eze
2 Ndingathandaza nini?
Umthandazo kumphefumlo wodwa ukwenza umntu eze yintoni?
Isebenza kakhulu ukwenza loo mntu yiza kudibana nathi ngokumenza ukuba akwazi ukunxibelelana nathi.
Isidingo esenziwe kuloo mntu ukuze asibone sikhula de asityelele asinakufikeleleka.
Isixhobo esinamandla esinokusisebenzisa kunye nokholo nangaliphi na ixesha esifunayo, nokuba ngaba yimini yonke na.
U-Anima Sola, ingcwele yam esikelelekileyo, ndiyakucela ngokholo olukhulu ukuba wenze lo mntu ...
(igama elipheleleyo lomntu)
Ndibuyele ezingalweni zam, ukuba ukusukela namhlanje ndiziva ukuba sisadityaniswa yimixokelelwane yothando, ndiyakhunga, amandla akho amakhulu okubuyela ngentliziyo evulekileyo kum kwaye akukho nto ikususa ecaleni kwam, ukuba uqhubeke nokundithanda ngomphefumlo, emzimbeni kunye nomoya , kususela ngoku kude kuse ephakadeni.
Ndikubongoza kulo mthandazo kumphefumlo uwedwa ukuba wenze umntu, u-Anima Alone, ndiboleke uncedo lwakho.
Ndiyakucela, ngalo lonke ukholo lwam, Anima Alone, ukuba wenze, ngesipho sakho esingummangaliso, ukuba umntu endimthandayo kangaka abuyele kum, ngentliziyo ezele luthando nokuqonda, ngenxa yoko.
Cwaka ndedwa, ndinikezela lo mthandazo kuwe, osuke kum, ndiyakucela, ungandilibali, ukuba ndihlala ndisengqondweni yakho.
Kwaye ndiyakuthembisa ukuba nje ukuba lo mntu abuye,, Ndiza kukwenzela okulandelayo, _enkosi
Khumbula ukuba akukho ndawo ikhethekileyo, usuku okanye imeko ukwenza lo mthandazo.
Inokwenziwa nangaliphi na ixesha okanye indawo.
Ukuba ufuna ukukhanyisa ikhandlela okanye ukwenza okungakumbi ngaphambi kokuthandaza, kulungile, kodwa loo nto ayizukuwenza umthandazo ungaphantsi okanye ube namandla.
Ikhethekileyo yokwenza kwiimeko apho kukho ilungu losapho elahlekileyo okanye elithwelwe kwaye lisebenza nakwizilwanyana ezithile zasekhaya.
Amandla kunye nokusebenza kwalo mthandazo kuyamangalisa nokuba kunzima kangakanani kummangaliso.
Kufuneka sithandaze yonke imihla. Kufuneka sibe nokholo kwimithandazo kwaye sikholwe.
Ukuba asinalo ukholo asiyi kuphathwa ngononophelo.
Ucinga ukuba iya kuqhuba kakuhle. Umntu oza kukuphulaphula aze ancede kwisicelo sakho.
Thandaza kanye ngemini, unokholo kunye namandla. Ngexesha nje elifutshane iodolo yakho iya kuthathelwa ingqalelo kwaye uya konwaba.
Ukuba ufuna, khanyisa ikhandlela emhlophe okanye ikhandlela elibomvu lokubulela.
Amakhandlela akhonza kuwo nika kula maziko anceda thina kwimiyalelo yethu.
Yinto elula, kodwa isebenza kakhulu.
Ihlabathi Okwasemoyeni kuyinyani esirhangqwe kuyo kwaye inyani yokuba asifuni kuyithatha ngokungathí sina ayithethi ukuba ayikho, yiyo loo nto ukuzenza ezo zixhobo zokomoya zibe ngamandla ethu.
Las imithandazo eyenziwe ngomphefumlo iza namandla akhethekileyo kuba akukho nto injengokunyaniseka xa uthetha nomntu wokomoya.
Inye lawula elihlangabezana nayo yonke imithandazo eyenziwa ebomini, nokuba ngubani na, kufuneka zenziwe rhoqo ngokholo kuba kuphela kwento eqinisekisa ukuba umthandazo uya kufumana impendulo.
Thandaza umthandazo kumphefumlo uwedwa ukwenza umntu eze nokholo. Yonke into izakulunga.